Yazi iwebhu eqikelela ukuba yeyiphi incwadi onokuyithanda | Uncwadi lwangoku
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luqhelene "neebhokisi ezimangazayo" ezinemfashini kungekudala. Baza ekhaya kuthi ngendlela ubhaliso lwenyanga kunye ne Iindleko ezizinzileyo ngenyanga. Kukho zonke iintlobo zazo: ukutya, ifashoni, iimveliso zobuhle, izilwanyana zasekhaya, njl. Ewe, uyolo kunye nokonwaba kokufumana into emangazayo ifikelele kwilizwe leencwadi. Kukho inkampani, iyazibiza Cualestulibro.com, emalunga noku kwaye siza kukuxelela ngakumbi ngeenkcukacha.
UMdali kunye nabasebenzisanayo
Umyili wayo, Yael uBenjamin, ophumelele kwiMbali yobuGcisa kwiDyunivesithi yaseMalaga enesidanga se-master kwi-Publishing kwi-Autonomous University yaseMadrid, ediniwe kukubona indlela iivenkile ezithengisa iincwadi ezivaliweyo kunye nendlela ekukho ngayo kuphela igumbi 'labathengisi' abakhulu, wayenolu luvo lukhulu kwaye yaqala.
Okwangoku, le projekthi iyasebenzisana:
Isiqingatha esiphindwe kabini: Umbutho wezenkcubeko othi, ngentsebenziswano nesitolo seencwadi seProteo, ubonelele ngeendibano zocweyo zokubhala.
Iilayibrari zeProteus kunye nePrometheus: Ngaphezulu kweminyaka engama-50 yamava evenkile yeencwadi.
Ilayibrari yezibane: Ivenkile ezimeleyo enee-15 leminyaka yamava, eMalaga.
Ivenkile yeencwadi zencnc: Ithala leencwadi laseMalaga ngokukodwa kwizifundo zoBugcisa, ezeMbali, ezoncwadi kunye nefilosofi, kunye nasekudalweni kwamacandelo anikezelwe kwizihloko okanye kuhlobo oluhlala lilityalwa, njengomculo.
Amaphepha ebhodi: Inkampani eneminyaka engaphezu kwama-20 inikezelwe ekwakhiweni okwenziwe ngezandla kweencwadana ezikhethekileyo, ii-ajenda kunye neencwadi zedilesi.
Iingcebiso zegolide: Ivenkile egxile kwiitayi ezisemgangathweni, iitshokholethi kunye nokunye ukumiliselwa.
Injani inkqubo yobhaliso kunye nokungeniswa
Yaziwa njenge 'Ibhokisi yeencwadi' kwaye ukubhaliswa kwayo kulula: ubonakalisa igama lakho, ifani, idilesi yokuthumela kunye nenombolo yomnxeba ngokolwazi. Kwaye emva koko bakubuza imibuzo elula malunga nezinto ozithandayo zoncwadi: iincwadi ozithandayo, ababhali obathandayo, loluphi uhlobo ofuna ukulufunda, ukuba ukhetha incwadi onokucinga ngayo okanye uphumle, zingaphi iincwadi oqhele ukuzifunda ngonyaka ...
Emva kokunika lonke olu lwazi, ukhetha indlela yokuhlawula: ungayenza ngekhadi okanye ipaypal.
Ndawuthanda lo mbono kakhulu. Kakhulu, kangangokuba ngelixa ndisenza eli nqaku, ndizalisa idatha kwaye ndikuxelela ukuba loluphi ulwazi onokuthi ulunike.
Ukuba uyawuthanda umbono kwaye awufuni kulinda ixesha elide ukubona ukuba yeyiphi incwadi abayicebisayo, ndwendwela le webhusayithi ilandelayo: http://www.cualestulibro.com/
Ukongeza, kuthumelo lokuqala, bathumela iinkcukacha kwabo babesebenzisana nabo, esele kukhankanyiwe: i-Paperblanks kunye neeNgcebiso zeGolide. Ndikhangele phambili kuyo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Yazi iwebhu eqikelela incwadi onokuyithanda
Ukubhala ngonyango, isibonelelo seengqondo zethu